Dagaal Khasaare geystay oo Shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed ku dhexmaray Gobolka Baay – STAR FM SOMALIA
Dagaal Khasaare geystay oo Shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed ku dhexmaray Gobolka Baay
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Baay ee Koonfurta Somaliya ayaa sheegaya dagaal Khasaare dhimasho iyo dhaawac ka dhashay inuu halkaasi ku dhexmaray ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Ururka Al Shabaab.
Dagaalkaan ayaa wuxuu ka dambeeyay, kadib markii ciidamada Ururka Al Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada Booliska Koonfur Galbeed oo ku sugan deegaanka Goofgaduud Shabellow.
Labada dhinac ayaa la sheegay inuu halkaasi ku dhexmaray dagaal Khasaare geystay, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed.
Taliye ku xigeenka ciidamada Booliska Maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Cari Case, ayaa sheegay saddex Askari oo ka tirsan ciidamadooda inay dagaalkaasi ku dhinteen, halka labo kalena uu dhaawac soo gaaray.
Dhinaca Shabaabka ayuu sheegay in Khasaare xoogan uu ka soo gaaray dagaalkaasi, balse ma uusan shaacin inta uu la eeg yahay Khasaarahaasi.
“Ciidamada Koonfur Galbeed saddex nin ayaa ka shahiiday labana waa dhaawac, iyaga dhinacooda wax wey ka dhinteen dhaawacana wey la carareen Ilaahey ayaa Mahad leh sharwadayaashii waan iska dhicinay.” Ayuu yiri Cari Case.
Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay la beegsadaan xarumaha ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Amisom ee Gobolka Baay.
Guddiga doorashooyinka oo la kulmay Ururada Bulshada Rayidka